Oculus Kutsvaga 2 kuongorora
November 16, 2020 by bartez64
Enda kuburikidza nechikwata che geeky pano paGSMArena uye iwe unogona kuwana nyore hupfumi hwehunyanzvi pane chero chinhu kubva kumadroni uye scooter emagetsi kumarobhoti ekutsvaira vacuum uye vanogadzira kofi vanogadzira. Kune boka revatambi vanofarira pakati pedu uye vazhinji vanonwa tinkers, saka hazvifanire kushamisika kuti kune vashoma veVR vanofarira mumusanganiswa, futi. Muongorori uyu aive neayo HMD yekutanga (Vive DK1) kumashure muzuva, ichiteverwa nekuyedzwa kwakasiyana siyana neiyo Samsung's Gear VR neGoogle's Kadhibhodhi uye mapuratifomu eDaydream uye mahedhiyo eVona. Kupfuura izvozvo, ini ndine ruzivo neyekutanga Oculus Rift, PlayStation VR, Pimax 4K uye ndanga ndichifambisa zuva nezuva iyo Lenovo Explorer kwemakore mashoma apfuura - imwe yeakanakisa Windows Mixed Reality zvishandiso zvakapoterera. Iyo yekupedzisira ichave inowanzo referensi poindi pamwe neyekutanga Oculus Kutsvaga, iyo ini zvakare ndine ruzivo nezvayo.
Zvinotoshamisa, zvakadaro, kana yangu yekare ruzivo, inobatsira sezvazviri, kana chero chimiro cheevhangeri pane ramangwana reVR hachinyatso kuve nebasa zvakanyanya mukutsvaga kweiyo nyowani Oculus Kutsvaga 2. Iyo Quest 2 haisi yezve yakaoma setups, yepamusoro kamuri-chiyero chekutevera masystem nema body sensors uye tambo pulleys kana yakaoma yakawanda-tier software inoenderana materu kuti uwane Leap kufamba kunoshanda mukati meVR mutambo pane isina kutsigirwa zviri pamutemo chikuva. Iyo polar yakapesana neizvozvo uye zvine nharo kuedza kwakanyanya kwatakaona kusvika parizvino kuunza VR kuvanhu vazhinji nekuita kuti iwanikwe.
Oculus Kutsvaga 2 tsananguro nekutarisa:
Musoro wemusoro: 191.5 mm x 102 mm x 142.5 mm (295.5 mm ine tambo yakazara-yakavhurika), 503g; Ruvara: chena.
Vanodzora: 90 x 120mm (pamutongi, kusanganisira yekuronda mhete ine IR LED-yakavakirwa yekutevera), 126g (pamutongi, pasina bhatiri), kutenderera 147g (ine bhatiri reAA); Around maawa makumi matatu ekushandisa kubva kune rimwe bhatiri reAA; Ruvara: chena.
Ratidza: IPS LCD, 1832x1920px pagore resolution, 90Hz yemuno yekuvandudza mwero (parizvino inokwanisa ye72Hz, 90Hz inouya nesoftware yekuvandudza); kwakakomberedza 90-degree ndima yekuona (inofungidzirwa); inogadziriswa IPD - matatu-chinzvimbo chinotsvedza - 58mm, 63mm uye 68mm
Chipset: Qualcomm Snapdragon XR2 (7 nm): Octa-core (1 × 2.84 GHz Kryo 585 & 3 × 2.42 GHz Kryo 585 & 4 × 1.8 GHz Kryo 585); Adreno 650.
Ndangariro: 64 / 256GB 6GB LPDDR5 RAM.
OS / Software: Oculus Mobile, yakavakirwa Android 10, hapana Google Play Services, inoshandisa chengetedzo yeOculus chitoro kune maapplication nemitambo; Inotsigira kutamba PC VR mitambo kuburikidza neOculus link uye yechitatu-bato isina waya mhinduro.
Kuchengeta: Inotsigira 6 madigiri erusununguko (6DoF) musoro uye ruoko kuronda kuburikidza yakabatana Oculus Insight tekinoroji (mukati-kunze kuteedzera); 4 kumberi-yakatarisana nemakamera ekuona anoongorora ekuteedzera, pamwe magyroscopes uye accelerometers mune mahedhifoni uye anotonga; Ruoko rwekutevera (beta).
Tamba nzvimbo: Kumira uye kamuri-chiyero rutsigiro, inosvika kutenderera 20m x 20m nzvimbo yekutamba inogona kugadzirwa.
Headset Bhatiri: 3,640 mAh (14.0 Wh) lithium-ion (maawa maviri kusvika matatu ekushandisa pamutengo mumwe chete); 2W ([email inodzivirirwa]) kubhadharisa (kutenderedza maawa maviri nemubhadharo wakazara)
Mutinhimira: Akavakirwa-mukati ma stereo masipika uye maikorofoni, 3.5mm odhiyo jack, rutsigiro rwe 3D odhiyo.
Kubatana: Wi-Fi b / g / n / ac (5) / ax (6), 60 GHz Wi-Fi ay module (parizvino isiri kushandiswa); Makaralı 5.0 LE; Type-C USB chiteshi, iine USB Host rutsigiro; 3.5mm odhiyo jack.
Izvo zvinoshanda kune zvese zviri zviviri chiitiko chega maererano neyakareruka pamwe nemitengo. Oculus akaita mamwe matanho akakura neiyo yekutanga Quest. Izvo chaizvo zvakakwanisa kusanganisa iko nyore kwe "mukati-kunze" kuteedzera, kubvisa kudiwa kwepylons uye imba-yekuzadza Hardware setups nekunyaradza kwePC-yakazvimirira chiitiko. Kubata icho chiri chakakoshesa smartphone mumusoro mako kunogona kuita kunge mbeveve pamusoro, asi chaiko kwakakwanisa kubudirira kubvisa huwandu hukuru hwechinyakare VR zvipingamupinyi.
Iyo Quest 2 saka inovaka pane yakasimba Quest hwaro pamwe neyese-kutenderera kuvandudza - inokurumidza chipset, yepamusoro resolution uye zororo rate, zvirinani kuteedzera uye kubatanidza uye zvimwe maficha kupfuura nakare kose. Pamwe zvakanyanya-zvakakosha pane zvese, kunyangwe - mutengo wepasi wekutanga we $ 299 chete yeiyo 64GB vhezheni uye uchikwira kusvika ku $ 399 ye256GB imwe, inova huru $ 100 yekudada inodonha kubva kuKutanga kwekutanga.
Chokwadi, izvo zvakauya nezvimwe zvibayiro. Kunyanya kucherechedzwa epanyama mune zvekuvakisa uye zvakareruka kuvaka uye pasina bundled tambo, asi mashoma mamwe ekudzikisira pano nepapo. Zvisinei, hapana chinhu chakakosha kune chiitiko chaicho chakabviswa.
Kune zvirinani kana zvakaipa, izvo zvakanyanyisa Facebook-yakapihwa, asi zvakare yakapihwa mari yakawanda Kutsvaga 2 ndiyo yepedyo yatakambowana papepa kuVR kune ruzhinji. Chishandiso chiri nyore-kumisikidza chakazvimirira icho chisingadhuri chinotarisira kukwezva vamwe vatsva kunzvimbo inoshamisa yeVR. Ipo ichiyedza kuidaidza iyo Nintendo Wii yeVR, ichinyanya kukurumidza uye zvishoma-chishuwo chekuita zvivindi zvakadaro. Izvo zviri kutaurwa, batana nesu apo isu tichitsanangura chikonzero nei tichitenda kuti Quest 2 yakanaka zvakakwana kuunza vashandisi vatsva munzvimbo uye pamwe kunyangwe vamwe vasiri-gamer uye iri nyowani wekuenda kuVR headset.
Hardware, nyaradzo uye ergonomics
Tichaita nepatinogona napo kuchengeta ichi chipfupi. Sezvo kuenzanisa pakati peiyo nyowani Oculus Kutsvaga 2, iyo yekutanga Yekuda neyangu, zuva nezuva-rinosemesa Lenovo Explorer ichauya yakawanda, ngatitangei nekukurumidza tafura, kutsanangura yavo specs.
chigadzirwa Oculus Quest Oculus Kutsvaga 2 Lenovo Explorer
Headset 193 x 105 x 222mm, 571g; Ruvara: nhema / grey 191.5 mm x 102 mm x 142.5 mm (295.5 mm ine tambo yakazara-yakavhurika), 503g; Ruvara: chena 185.1 x 94.8 x 102.1mm, 380g; Kureba kwetambo: 4m; Ruvara: Iron Grey
Vatongi 86 x 120mm (pamutongi, kusanganisira yekuronda mhete ine IR LED-yakavakirwa yekutevera), 115g (pamutongi, pasina bhatiri), 136g (iine AA bhatiri); Around 7.5 maawa ekushandisa kubva kune rimwe AA bhatiri; Ruvara: nhema 90 x 120mm (pamutongi, kusanganisira yekuronda mhete ine IR LED-yakavakirwa yekutevera), 126g (pamutongi, pasina bhatiri), 147g (iine bhatiri reAA); Around maawa makumi matatu ekushandisa kubva kune rimwe bhatiri reAA; Ruvara: chena 152.7 x 119.1 x 119.1mm (pamutongi, kusanganisira yekuronda mhete ine IR LED-yakavakirwa yekutevera), 126g (pamutongi, pasina bhatiri), 168g (ane maviri mabhatiri AA) Bluetooth 4.0 yekubatana nePC; Yakagadziriswa yeMicrosoft Mixed Reality mahedhifoni; Ruvara: nhema
kuratidza OLED, 1440x1600px pachigadziko cheziso, 72Hz yemuno zororo zororo; kwakakomberedza 100-degree munda wekuona (inofungidzirwa); inogadziriswa IPD - 56 kusvika 70 mm pane yakatsetseka inotsvedza IPS LCD, 1832x1920px pameso ekugadziriswa kweziso, 90Hz yemuno yekuvandudza mwero (parizvino inokwanisa ye72Hz, 90Hz inouya nesoftware yekuvandudza); kwakakomberedza 90-degree ndima yekuona (inofungidzirwa); inogadziriswa IPD - matatu-chinzvimbo chinotsvedza - 58mm, 63mm uye 68mm 2x 2.89 ″ LCD, 2880 x 1440px pachigadziko cheziso, 90Hz yemuno zororo zinga; 110-degree munda wekuona; hapana chairo IPD chinogadziriswa, chete mune software
Chipset uye ndangariro Snapdragon 835 (10 nm), Adreno 540, 64 / 128GB, 4GB LPDDR4X RAM Qualcomm Snapdragon XR2 (7 nm), Adreno 650, 64 / 256GB 6GB LPDDR5 RAM hapana
Tracking 6DoF musoro uye ruoko rwekutevera kuburikidza neyakabatanidzwa Oculus Insight tekinoroji (mukati-kunze kwekutevera), Ruoko kuteedzera (beta) 6DoF musoro uye ruoko rwekutevera kuburikidza neyakabatanidzwa Oculus Insight tekinoroji (mukati-kunze kwekutevera), Ruoko kuteedzera (beta) 6DoF musoro uye ruoko rwekutevera (mukati-kunze kwekutevera)
Headset Bhatiri 3,640 mAh (14.0 Wh) lithium-ion (maawa maviri kusvika matatu ekushandisa pamutengo mumwe chete); 2W ([email inodzivirirwa]) kubhadharisa (kutenderedza maawa maviri nemubhadharo wakazara 3,640 mAh (14.0 Wh) lithium-ion (maawa maviri kusvika matatu ekushandisa pamutengo mumwe chete); 2W ([email inodzivirirwa]) kubhadharisa (kutenderedza maawa maviri nemubhadharo wakazara hapana
Audio Akavaka-mune stereo masipika uye maikorofoni, 2x 3.5mm odhiyo jack, rutsigiro rwe 3D odhiyo Akavaka-mune stereo masipika uye maikorofoni, 3.5mm odhiyo jack, rutsigiro rwe 3D odhiyo 3.5mm audio jack
Kubatana Wi-Fi b / g / n / ac (5); Makaralı 5.0 LE; Type-C USB 3.0 chiteshi, iine USB Host rutsigiro; 2x 3.5mm odhiyo jack Wi-Fi b / g / n / ac (5) / ax (6), 60 GHz Wi-Fi ay module (parizvino isiri kushandiswa); Makaralı 5.0 LE; Type-C USB 3.0 chiteshi, iine USB Host rutsigiro; 3.5mm odhiyo jack Y Cable ine HMDI vhidhiyo yekubatanidza uye USB 3.0; 3.5mm odhiyo jack
OS uye software Oculus Mobile, yakavakirwa paGoogle 7.1.1, hapana Google Play Services, inoshandisa chitoro cheOculus chitoro cheapps nemitambo; Inotsigira kutamba PC VR mitambo kuburikidza neOculus link uye yechitatu-bato isina waya mhinduro Oculus Mobile, yakavakirwa paGoogle 10, hapana Google Play Services, inoshandisa chitoro cheOculus chitoro cheapps nemitambo; Inotsigira kutamba PC VR mitambo kuburikidza neOculus link uye yechitatu-bato isina waya mhinduro tizvishandise Windows Yakasanganiswa Reality portal paPC nerutsigiro rwemamwe akawanda PC VR mapuratifomu nemitambo
Iyo nyowani Quest 2 yakafanana chaizvo mune zvese dhizaini uye zviyero kune yakatangira, asi pa503 gramu, zvinoonekwa zviri nyore. Iyo chaiyo yekuwedzera maererano neshanduko yangu pachangu kubva ku380-gramu Lenovo Explorer.
Iyo yekuwedzera helf iri nyore kurarama nayo kana iwe uchifunga kuisirwa kweiyo inonyanya kuita nharembozha yakazara, pamwe nebhatiri kumberi kweese ari maviri Kuda uye Kutsvaga 2. Zvese zviri zviviri zviri kumberi-zvinorema, chinova chinhu chimwe ini pakarepo akanzwa, achienzaniswa neLenovo Explorer. Kana iwe ukatenderedza musoro wako nekukurumidza, iyo yekuwedzera huremu inoshanduka pachiso chako inogona uye ichakunetesa iwe zvishoma.
Beyond mbishi huremu, zvakadaro, hombe chikamu cherudzi irworwo rwekunyaradza runouya pasi kusvika kuhuremu hwekuparadzira uye tambo dhizaini. Iyi inzvimbo imwe umo Oculus akanyatsoderedza iyo Quest 2. Iyo nyowani Velcro tambo dhizaini iri nyore uye zvirokwazvo yakachipa pane iyo iri paKutanga kwekutanga. Maitiro ese paLenovo Explorer akasiyana zvakanyanya - inoshandisa imwe yeakanakisa magadzirirwo maererano neergonomics, pamwe nekushanda, iine snap-up hinge yayo. Iwe unogona zvakare kuona mukati pane iyo PlayStation VR headset.
Zvisinei, iyi inogona kunge iri pfungwa isingafarirwe, asi ini pachezvangu ndakawana tambo iri paQuest 2 yakasununguka pane iya yepakutanga, kunyangwe kana iri yakaderera kune iyo iri paLenovo. Iyo yekutanga Yekuda yakangosvinira musana wemusoro wangu nenzira yakaoma kusvika pakusvitsa marwadzo. Iyo velcros, nepo isina kuchengetedzeka, inogona kugadziridzwa zvakati wandei uye usachera mudehenya zvakanyanya. Rutivi rwekugadzirisa paChipiri 2 rinoshanda rakafanana netambo dzechikwama, izvo zvine hungwaru-zvakachinjika kupfuura echirimo-chakatakurwa, kunetsekana-kwakavakirwa slide-kunze mashandiro pane iyo yekutanga Kutsvaga. Kunyangwe, zviri pachena, iyo yekutanga Quest iri nyore kwazvo kuisa neruoko rumwe.
Iyi ichave iri nyaya yekuravira kwega uye kana uchiri kufarira dhizaini yekare zvirinani, Oculus achanyanya kufara kukutengesera Elite tambo yeQuest 2. Kune mamwe mabhande anosanganisira yekuwedzera bhatiri pack uye kunyange yechitatu-bato sarudzo uye yakawanda yemhinduro dze DIY dzekubatanidza mabhanhire epamberi kuQuest 2. Pakazara, nharaunda yeQuest ndiyo inoda kugadzirisa, tinker uye nekuwana ma workaround, kana icho chiri chinhu chako.
Kuenderera mberi nekufananidzwa kwemuviri pakati peKutsvaga 2 uye kwekutanga Kuda zvishoma zvishoma, zvakakosha kuti uzive kuti chekare unit hachina kungorema chete, asi zvakare chakakura. Izvi zvine hungwaru yekuwedzera kune yekare dhizaini, asi sezvo iine inowoneka yakaenzana kukwana kutenderedza kumeso uye yakawanda nzvimbo yemukati pakati pechiso chako nema lenzi. Nekudaro, kune mukuru mukuru, dhizaini yekare zvine nharo kusununguka.
Kana iwe ukapfeka magirazi, iwe ungangoda kuda kuzviita neVR mune zvakajairwa, nekuti zvisinei nekuti iko kuratidzwa kuri masendimita chete kubva pameso ako, zvinokanganisa senge myopia zvichiri kushanda kuzvinhu zvinooneka-zviri kure pazvikwiriso. Oculus yatora izvi uchifunga uye ine imwe yekuwedzera spacer mubhokisi rese ari maviri ekutanga Quest uye iyo Quest 2. Iwe unobata icho kuseri kwechiso chemuso cushion kuti uzvipe iwe imwe yekuwedzera clearance. Iwe unorasikirwa neimwe nzvimbo yekuona semhedzisiro, zvakadaro.
Mune ruzivo rwangu ndoga, kutora magirazi angu mukati mechero headset kwave kuri kunetsa. Kunyangwe zvichiri nyore pane iyo Oculus yekutanga, sezvo iyo Oculus 2 yakatetepa pa "mukova" zvekuti magirazi akakura haatombopfuura nepapo, ichiri kure nekukodzera pane chero headset. Uyezve, lenzi zviri nyore kukwenya, saka ndakazopedzisira ndangoedza izvi kamwe chete, ndichitadza uye ndobva ndasarudza kurarama newiropia chiratidzo muVR.
Kuparadzanisa kumeso kwangu kwakadikitira uye kune ndebvu kubva kuma lens zvishoma zvakabatsira nemamiriro ekutsvaira zvakadaro. Zvishoma pane iyo nyowani Quest 2 pane yepakutanga, nekuti iyo yaibvumidzwa kubva padiki yemhepo kuburitswa kubva mumhino dzangu kuenda kumusoro kune musoro uye fog zvinhu kumusoro. Ini ndakanga ndisina matambudziko akadaro pane nyowani yakasimba-yakakodzera dhizaini.
Ita shuwa yekutora aya mapoinzi nezve kukwana uye kunyaradzwa nekamwe munyu sezvo zvichisiyana kune wese munhu. Ini pachangu ndinowanzoita kudikitira kubva kuVR ndisati ndarwadziwa kana kusagadzikana kubva pamabote kana kumeso chidimbu, nepo vamwe vashandisi veVR vakandikomberedza vakataura zvakapesana chaizvo.
Tichitarisa paKutsvaga 2 uye yekutanga Chemberi padivi padiki, asi, chokwadi chekuti dhizaini nyowani ine yakajeka-yakawanda-bhajeti bhiri yezvinhu rakanyanya tarisiro.
Kunyangwe kusvetuka pane zvimwe zvidiki zvidiki pano neapo, senge mesh pamusoro peiyo yekutanga kana iyo gobvu tambo dhizaini, iyo Quest 2 ichiri kunzwa yakasimba uye yakanyatsoiswa pamwechete. Iwo malenzi anogona kunge achiramba ari akanyanya kunetseka anofanirwa kuchengetedzwa, Zvimwe kunze kweizvozvo, isu tine chokwadi chekuti zvese mahedhifoni uye madhimoni nemapurasitiki avo akakora vachararama nemabhonzo uye nekurova. Pamwe kunyange kushandiswa nevana vadiki.
Iyo nyowani chena color scheme inonyatsoratidza kupfeka uye kubvarura kupfuura iyo yekutanga rima iyo. Nekudaro, ichiri kutaridzika kunge yakapusa uye pamutengo wemutengo wavakakwanisa kuwana, isu hatigone kunyatso pomera Oculus nekuchengetedza peni pese dzavanogona, kunyangwe kana iri diki senge yekuenda nemutengo wakaderera wepurasitiki.
Chaizvoizvo iyo nyowani Oculus Kutsvaga 2 uye iyo yekutanga yakafanana zvakanyanya maererano nezvinhu zvinoshanda. Zvinonzwisisika, tichiona mashandisiro anoita vaviri mhando imwechete ye "mukati-kunze" kuteedzera vane izvo zviri chaizvo seti izere yezvinhu zve smartphone zvakapetwa mukati kuendesa mashandiro akafanana.
Kuwedzeredza zvinhu zvishoma, "mukati-kunze" kuteedzera kunongedzera kuchimiro chinoteedzera chakakomberedza uye chinzvimbo chemusoro uye madhiraivhi pasina kushandiswa kwema sensors ekunze, semapiloni mamwe mahedhiyo epamusoro-ekupedzisira ePC anoshandisa. Panzvimbo iyoyo, iyo Kutsvaga uye Kutsvaga 2 vanovimba neseti ina mana akasarudzika makamera kumberi, akafanirwa kuteedzera zvine hungwaru-akaiswa IR emitters pamiromo yevatongi, pamwe chete nemagroscopes uye accelerometers.
Ndiyo chaiyo nzira chaiyo yekutevera. - Kwete. Inotambura nekukanganisa kwemukati, sekutadza kunyatso tarisa iwo anotonga uchiri kunze kwenzvimbo yekuona kamera. - Ehe. Izvo zvakanaka zvakakwana kune akawanda zviitiko uye avhareji vashandisi kunze uko, uku uchichengeta zvese zvakachipa, zvakapusa uye zvakanyanya kuumbika? - Hungu hungu.
Tisati tasvika kune vanodzora, isu tine zvimwe zvinyorwa zvishoma pane zvinodzora pane headset, futi. Sezvatakataura, iyo Kutsvaga uye Kutsvaga 2 zvine sisitimu yakazara yezvinhu zve smartphone mukati, saka hazvishamise kuti yavo I / O yakafanana, kunyangwe ikatenderera zvishoma. Iyo Type-C kuchaja uye dhata dhata uye 3.5mm odhiyo jack ichiri kuruboshwe kuruboshwe pane ese maviri mamodheru, kunyange zvishoma kutamiswa.
Iyo nyowani nyowani nyowani ichine dzakatenderedza 2 kusvika 3 maawa ejusi pane imwechete kubhadharisa, seyekutanga Chekuda. Vaviri vanoshandisa zvakafanana 3,640 mAh (14.0 Wh) Li-Ion bhatiri pack. Kubhejera kungangove kuri padhuze nemaviri, nepo chimwe chinhu senge kuona-bhaisikopo kunogona kukutorera maawa matatu uye kumwe kuchinja.
Kubhadharisa kuzere nechaja uye tambo mubhokisi kunotora kwakatenderedza maawa 2.5. Kunyangwe paine yazvino Type-C interface, iyojaja inongoratidzwa chete [email inodzivirirwa] kana 10W yazvino. Iko hakuna Kuendeswa kweMagetsi, zvinoreva kuti inoshanda zvakangofanana nechaja. Uyezve, neaya akapusa simba zvinodiwa, "MacGyver-ing" bhatiri-bhangi mhinduro yeiyo yekuwedzera muto zvakare inogona kuitika neanenge ese magetsi emagetsi kunze uko.
Kudivi rerudyi, iyo yekutanga Quest ine bhatani remagetsi, chinongedzo chemamiriro uye yechipiri 3.5mm jack. Iyo setup, nepo inogona kuve nyore mune zvisingawanzo mamiriro ezvinhu yakafungwazve uye yakareruka neyechipiri 3.5mm jack isipo kubva kuQuest 2 uye kurongeka kwakati siyanei kune mamwe maviri maitirwo.
Pasi peChipiri 2 inobata rocker yehorodhi, senge iyo yekutanga Chechi. Chinhu chinonyanya kushayikwa iIPD (inopindirana nzvimbo) inotsvedza yekutanga. Marongero eIPD akakosha zvakanyanya kuti uwane mufananidzo wakajeka muVR. Imwe yema gripes mahombe andinayo neangu Lenovo Explorer ndeyekuti senge mamwe akawanda maMicrosoft Mixed Reality mahedhifoni, inoshaya panyama kugadziridzwa kweIPD uye inongoita izvozvo manhamba munzira isina kukwana zvakanyanya.
Neraki, kunyangwe ichishaya inotsvedza yekunze inotsvedza yeakautangira, iyo Quest 2 ichine gadziriso yeIPD yemuviri! Iwe unongobata malenzi uye zvinyoro nyoro, mumuviri unotsvedza mukati kana kunze. Iwo maviri akasungwa pamwechete uye akawanda mukubvumirana uye anopinda muzvikamu zvitatu zvakagara zvatsanangurwa - 58mm, 63mm uye 68mm. Iyi yakafara-yakafara IPD renji (kunyangwe kana isiri iyo yese-inosanganisira). Uyezve, kana iwe ukaona kuti yako IPD inowira pakati pezviviri zvekufanogadzirirwa, uine moyo murefu wakakwana uye nemazvo, unogona zvinyoro nyoro malenzi munzvimbo yepakati-pevhu wobva waasiya ipapo.
Iko kune yepedyo sensor mukati meChipiri 2, pakati pemalensi, iyo inotaridzika zvishoma-isina kuchena kupfuura iyo yekutanga Chechi, asi inoshanda futi zvakare yekuona kana iwe uine yako headset pa. Iko kune sarudzo yekuti uve neiyo Quest 2 otomatiki kubatidza kana iwe waiisa iyo.
Chekupedzisira, asi chisiri chidiki, sekutanga Chekutanga, iyo Quest 2 ine ese maspika uye maikorofoni akavakirwa-mukati. Ose ari maviri anovandudzwa zvinoonekwa zvakare. Masipika akaiswa mukati memapurasitiki epadivi anonamira kune tambo yemusoro uye zvakare, inopa diki diki yekutwasuka yakatenderera - yakatenderedza 30 degrees kumusoro uye pamwe madhigirii mashanu pasi. Masipika ari paQuest 5 anodzoserwa kumashure zvishoma uye ane mvumo iri nani pane iya iri paKutsvaga. Ivo vanotaridzika kunge akakura, ndosaka zvichinzwika zvirinani. Seye parutivi noti, sezvo inowanzo kukwira, iyo Quest 2 inotsigira 2D odhiyo.
Iyo Quest 2 ine mamaikorofoni maviri, akaiswa padivi rayo rezasi, ayo anonzwika zvinoshamisa zvakanaka uye akakwana zvakakwana mu-mutambo wezwi kutaura. Oculus pakutanga aive nenyaya dzekuita kuti izvi zvishande apo Quest yakabatana nePC kuburikidza neOculus Link, iyo yakagadziriswa.
Kungofanana neyayo yakazara dhizaini yemusoro, Oculus haina kuchinja zvakanyanya vatungamiriri vayo. Chimiro chakazara chakafanana chaizvo uye mazhinji eakafanana akacheka-musana muzvinhu uye nzvimbo inogona kuwanikwa pane vanodzora. Semuenzaniso, iyo inobata, yakapfava-epurasitiki mabhii ekutanga Chekutanga aenda, akatsiviwa neyunifomu, imwechete-yechinhu chepurasitiki kupera. Kunyangwe, sekungofanana neyemusoro wega, uku kuchinjaniswa kwezvinhu hazvisi izvo zvese zvinoonekwa kana zvinokuvadza.
Vateveri venguva refu vechiratidziro vanogona kucherechedza kuti vanodzora veQuest 2 vanoita kunge vanokwereta zvishoma kubva kune vakavatangira. Iyo Quest 2 headset inogona kunge yakadzikira zvishoma kana ichienzaniswa neiyo yekutanga Quest, asi iwo macontrol akakura zvishoma mumativi ese. Iyo nyowani dhizaini inonzwa inofadza kune vanhu vane hombe maoko.
Oculus Kutsvaga 2 vatongi
Iyo yekuwedzera kukura inouya pamwe nekuvandudzwa ergonomics yeChidimbu 2 controller. Iyo bhatani dhizaini inogona kuve yakawanda, kana kushoma, isina kuchinjika kubva kune Vanilla Kutsvaga dhizaini, asi zvese zviri nani kupatsanurwa kunze izvozvi. Iko zvakare kune yakatsaurwa chigunwe yekuzorora nzvimbo kune iyo divi, kune iwo akawedzera zvakanyanya mitambo yemitambo iyo inokoka netsaona bhatani-michina. Iwo maOculus epamba uye emabhatani emenu akaendeswa kune rimwe divi rakatarisana uye akadzokerwa kumucheto kumwe chete. Chigunwe chechigunwe pane chaicho mutongi kunyange chine chigamba chakagadzirwa, saka unogona kunzwa uye kusiyanisa madhiragi maviri. Basa iro rinotariswa nekamera kuona paChipiri 2 zvakarerutsa nekuisa zvine simba L uye R zvinyorwa pamusoro pevatongi.
Iwo matsva ekudaira 2 madhairekitori akawedzera kuwanda pazasi pemabatiro, ayo zvakare anobatsira nekunyaradza uye anogona kunge aine hukama nechairo bhatiri chivharo dhizaini uye chinzvimbo. Oculus akabudirira kugadzirisa iyo bhavhavhavhavhavhavhavha yekuvhara pane iyo yekutanga Chikumbiro, iko kwaigona kuzogogodzwa-kubviswa zvakaringana-nyore mumutambo. Iyo Butiro 2 bhatiri kavha yakaiswazve uye ine yakasimba kwazvo clip.
Kufanana nevatangiri vayo, vatongi veQuest 2 vanoshandisa imwechete AA bhatiri. Kurema-huchenjeri, new controller anotenderedza akakomberedza 147 gramu, nebhatiri - tad inorema kupfuura iyo 136-gramu Kutsvaga 1 Oculus Kubata controller, asi kwete kure kure. Zvakadaro huremu hunorema kunyangwe dhizaini nyowani iine mashoma ekuteedzera infrared maLED.
Oculus anoti iyo nyowani controller inochengeta yakafanana uye kunyange iri nani yekutevera. Izvi zvishoma zvine musoro uye zvakaoma kuyedza nemazvo asi isu tinogona kutaura zvine mutsindo kuti vashoma vedu pahofisi vakawana iko kwese kuteedzera kwakaringana uye kugadzikana kweiyo nyowani Quest 2 zvirinani pane yekutanga. Kunyanya nezvinhu zvakaita semafambiro ane hukasha uye makesi ekuteedzera ekumucheto, uko mahedhifoni makamera anokanganisa kuona kwevanodzora uye software inofanirwa kugadzirisa kwemasekondi mashoma ichienda negyroscopic uye accelerometer dhata yega. Izvo zviri nani zvirinani paChipiri 2.
Kuva nemasaiti asingashande eECL ndechimwe chezvikonzero zviri kumashure kwekuwedzera kwakapetwa muhupenyu hwebhatiri pane vanodzora veQuest 2, zvichienzaniswa neVanotsvaga. Kumwe kubatana kwakangwara uye kurara algorithms inoshandura iwo ma controllers chete kana iyo Quest 2 iri pachiso chako kana ivo vatora, zvakare chengetedza pabhatiri zvishoma. Iwe unogona kutarisira kutenderedza maawa makumi matatu enguva yekutamba kubva kune imwechete AA bhatiri.
Kutenderedza kubva pane irwo rwekunakisa kwese kuvandudzwa kune vanodzora, isu tinofanirwa kutaura kuti haptic vibration pane yeQuest 2 vatongi vanonzwa zvinonzwisisika zvakanyanya kugutsa kupfuura chepakutanga.
Ratidza uye kutendeka kutendeka
Iyo Quest 2 inounza bump mune specs uye mashandiro mune akanyatso kunaka ese maficha. Kutanga nechisarudzo chekuratidzira, icho chiri kubva pa1440 × 1600 pixels (neziso rimwe) muKutanga kwepakutanga kusvika 1832 × 1920 pixels muQuest 2. Izvo zvinoita kuti pave nemusiyano unooneka unoshamisa. Iyo yekuvhara-musuwo mhedzisiro kubva kune iyo yekutanga, iyo, kune iyo isingazivikanwe, ndiyo inosuruvarisa mamiriro ekuona maburi pakati pemapikisheni muchiratidziro, sekunge sekunge uchiona chimwe chinhu kuburikidza nemusuwo wegonhi, unenge usipo paChipiri 2.
Iyo Quest 2 zvakare ine inokurumidza kuzorodza mwero we90Hz, uchienzaniswa neiyo yepamusoro 72Hz pane iyo yekutanga Cheji. Musiyano uripo pakati pe60Hz ne90Hz zvakare wakanaka zvinooneka nekufamba muVR. Sezvo zvinhu parizvino zvakamira paChipiri 2, pane yekuyedza 90Hz inoshandura mumamiriro, iyo inongokanganisa menyu uye kwete iyo chaiyo mitambo.
Oculus iri yakamirira zvakakwana kune avo vechitatu-bato vagadziri kuti vavandudze mitambo yavo isati yabaya iyo 90Hz switch system-wide, iine OTA yekuvandudza. Ehezve, maapplication nemitambo zvicharamba zvichikwanisa kunamira ku60Hz kana vakaona 90Hz zvisingaite kana zvisingaite sezvinhu zvakaita semultimedia yekushandisa kwekuchengetedza bhatiri.
Sezvo isu tiri pamusoro wenyaya, chimwe chinhu vazhinji vavandudziri vachiri kushanda parizvino kubhidha resolution uye yakazara graphical kuvimbika mumitambo yavo kutora mukana wekuwedzera resolution uye kuita paQuest 2. Izvi zvinoreva kugadzira nyowani yekuita chimiro kunyatso yeiyo headset uye kusundira iyo app / mutambo gadziriso.
Iyi inzira inotora nguva, kunyanya tichifunga akawanda mazita eVR anowanzo kuuya neruremekedzo rwezvikwata zvidiki uye ma studio, mazhinji akatombofungidzirwa kune mumwe indie mugadziri. Ndiyo mhando yekunaka kwechiitiko chinonakidza cheVR. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti akasarudzwa mashoma mazita anoumba iyo yekutanga Kutsvaga chaiko haishande paChipiri 2. Isu takawana nifty nharaunda-yakasungwa Google Spreadsheet kureva izvo, pamwe nekufambira mberi paKutsvaga 2-yakanangana nemitambo yekuvandudza. Nepo akawanda mifananidzo yekumisikidza zita pamusoro pekutanga kweKuda uye Kutsvaga kuti ive diki, isu tinofanirwa kuti Arizona Sunshine inotaridzika zviri nani pane iyo Quest 2 post-yekuvandudza, ine yepamusoro-resolution machira, akagadziridzwa zvachose, ari echokwadi zombie mhando, zvirinani kuvhenekera, kusanganisira mwenje unesimba, zvakawanda zvinomera nemhuka kumashure.
Sezvo izvi zvichizouya zvinokwanisika, hongu, iyo Quest 2 inoshandisa LCD tekinoroji pane OLED, izvo zvakatungamira kune vanhu vazhinji kugadzirisa pazvinhu zvakaita se "vatema vakadzika" uye "punchy mavara". Chokwadi, hatigone kuti takawana iyo Quest 2 isipo pane chero account. Isu takatsvaga zvimwe, zvine nharo zvakanyanya zvine chekuita neiyo tekinoroji switch yekufananidza, sekushomeka kwepedyo-pakarepo pixel-mhinduro nguva yeOLED. Kutendeseka, kunyangwe iri mhando yakanakisa yemuyedzo "unodzorwa" watakakwanisa kumisikidza, hatina kukwanisa kutaura mutsauko.
Kuvimbika kweVR kwese hakusati kuri padanho rezviratidziro zvakajairika, kwaunogona kuva nechivimbo kukurukurirana kwakadai kwekuzora uye pikisi yekupindura nguva, maringe nepaneru yekuzorodza. Mumamiriro ayo azvino, VR ichiri kubata nezvimwe zvinhu zvakawandisa sekufogora lenzi, isina kukwana tarisiro mapoinzi uye kuda kurutsa.
Kutaura kune imwe nhaurirano yakajairika pamhepo maererano nemunda wekutarisa uchibva paKutsvaga kuenda kuKutsvaga 2, takawana musiyano mudiki uye usingakoshe. Oculus haitauri zviri pamutemo ndima yekutarisa nhamba yeimwe, asi fungidziro dzakanakisa dzinoisa iyo yekutanga Chechi pa100-madigri uye iyo Quest 2 ingangoita makumi mapfumbamwe. Izvi zvingangodaro usati waunza zvinhu zvakaita semaspacers emagirazi, anounza munda unoshanda. yekutarisa pasi kumberi. Tichangozviisa nenzira iyi - tichiuya kubva kuLenovo Explorer pamwe neiyo 90-degree munda wekutarisa kusvika pamakumi mapfumbamwe-ish degrees paQuest 110 inoonekwa, asi chete kana iwe ukatsvaga iyo "tunnel chiratidzo" mhedzisiro. Muchokwadi kudzoreredzwa uye hukuru hwakanyanya huwandu hweVR ruzivo rweChipiri 90 inopa zvakanyanya kuvhara chero zvikanganiso zvakadaro.
Padanho rehardware iyo Quest 2 inotsvaira iyo Snapdragon 835 uye 4GB yeLPDDR4X RAM yeyekutanga Kutsvaga kweQualcomm Snapdragon XR2 uye 6GB yeLPDDR5 RAM. Iyo yekupedzisira inoita kunge yakavakirwa paSpapdragon 865 uye kunyange mishumo yakadaro mune yakajairwa Android Hardware info info. Izvi zvinoreva kuti zvikamu zvina zveCortex A77-yakatorwa CPU cores, imwe yekutanga inokwira kusvika ku2,841 MHz, matatu oramping anosvika 2,419 MHz, alonside mamwe mana emagetsi epasi-anoshanda, anoshanda anosvika 1,804 MHz.
Mubazi reGPU, isu tine Adreno 650 muQuest 2, kumusoro kubva kuAdreno 540 mune yekare. Izvo zvakare zvinonakidza kuziva kuti iyo yekutanga Quest ine OS yayo yakavakirwa pane kana zvirinani yakataurwa seye kuchembera Android 7.1.1 Nougat, nepo Quest 2 iine Android 10.
Kunze kwezviri pachena kugadzirisa kunoitwa mukuita mbishi, hatigone kufuratira chokwadi chekuti kusiyana neyakatangira, iyo inoshandisa yakajairwa chipset, iyo Quest 2 inoshandisa iyo XR2, iyo yakanyatsogadzirirwa mabasa eVR. Izvi zvinosanganisira kuvandudzika kunooneka sekukwanisa kubatanidza kusvika kumanomwe kamera kamera inopa kune iyo XR 7 uye kuteedzera huwandu hukuru hwema sensors neakanyanya kujeka.
Zvakare, kune software inovandudzwa papuratifomu, senge AI yakanangwa yakanangana nekufamba uye mamwe mabasa eVR, pamwe nekuziva kwemamiriro ekuziva izwi. Zvese zvinhu izvo zviri mumaoko evanokwanisa Oculus vagadziri vanowedzera kumusoro kune zvirinani huwandu hwechiitiko.
Kuve mageeks atiri uye sezvo zvese zviri zviviri Kutsvaga uye Kutsvaga 2 zvine hunyanzvi kumhanya Android, hatina kukwanisa kuzvibatsira pachedu ndokuseta padivi mamwe mabenchmark kumhanya, kungowana mamwe manhamba. Maitiro aya aive akazara nenyaya zhinji senge yekukanganisa kusanganisa uye graphical glitches, izvo zvinonzwisisika, sezvo isu tiri kunze kwekujairika zviitiko zvekushandisa pano. Mamwe mabenchmark akaramba zvachose kumhanya pane imwe kana ese mahedhifoni. Saka nekudaro, usanyatso verenga zvakawandisa mumhamba.
GeekBench 4.4 (yakawanda-musimboti)
Yakakwirira iri nani
Oculus Kutsvaga 2
GeekBench 4.4 (imwechete-musimboti)
Iyo nyowani GeekBench 5 yakaramba kumhanya zvachose uye hatigone kutaura kuti maGeekBench 4 manhamba ari chero kupi zvinoenderana nezvataizotarisira kubva kune aya seti eCPU cores. Zvekare, idzi nhamba hadzina kufananidzwa kunze kwekuedzwa kunoshamisa kwedu. Zvakadaro isu isu tinotarisira kuti mutsauko mukuita pakati pevaviri maQuets ndeweumwe kukosha.
Heano mamwe eGPU zvibodzwa zvekuti iwe utarise-ubudise futi.
GFX Manhattan ES 3.1 (offscreen 1080p)
GFX Manhattan ES 3.1 (pachiratidziri)
GFX Mota Chase ES 3.1 (offscreen 1080p)
GFX Mota Chase ES 3.1 (onscreen)
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti sekungofanana nechero yakajairwa Android app, GFX Bench yakamhanya pane yakati sandara pamusoro "kuratidza" mukati meOculus OS nharaunda. Iyo yekutanga Quest uye iyo Quest 2 ine zvakasiyana zvakasiyana "pa-skrini" resolution dzeiyi nharaunda - 720 x 540 pixels uye 900 x 675 pixels, zvichiteerana. Mune mazhinji maapplication ataedza, uyu mutsauko pamwe nemamwe maOS DPI parameter anga akakwana kumanikidza akasiyana akasiyana eUI marongero akasiyana emaapplication. Iyo Quest 2 zvirokwazvo yakashandisa iyo yakawedzera resolution yekumira zvirinani pane iyo yekutanga Chequest kunyangwe mune ino mamiriro ekumhanya isingatsigirwe sideloaded ma APK pane yakati sandara pamusoro.
Aztek Vulkan Yakakwira (onscreen)
GFX Aztek ES 3.1 Yakakwira (onscreen)
Icho chiitiko cheVR uye kuti inofananidzwa sei nemamwe mahedhiyo eVR
Kuuya kubva kuLenovo Explorer semutyairi wezuva nezuva VR misoro yemakore mashoma apfuura, iyo Quest 2 yakanyatso kundisimbisa kuti inguva yekuvandudza. Pfungwa dzako, kunyangwe iine zera, iyo Lenovo Explorer ichiri kuendesa hunyanzvi hweVR ruzivo - ine yakatsiga kwazvo yekutevera, yakanaka resolution 90Hz skrini uye yakanyatsogadzikana. Zvakare, iyo Windows Yakavhenganiswa Reality chikuva ine kuwirirana kukuru pamwe neanogona ese ese PC VR ruzivo kunze uko uye hukuru hwekutonga mepu yekunamatira kuita kuti dzese dzishande.
Nekudaro, iri chaizvo iyo yakasanganiswa Reality portal uye yayo yakazara mushandisi ruzivo iyo yakanyatso kutanga kuratidza yavo zera, zvichienzaniswa neazvino Oculus chiitiko. Kutanga neyakanyanya nyore uye inotungamirwa nzira yekumisikidza.
Yese mirairo iri pachiratidziri, hapana mabhatani ekubvumirana uye maBlue materu maitiro. Iwe unongo pfeka iyo Quest 2, pfuura nepakati pekukurudzira, wobva waenderera nematanho mashoma pane shamwari app pafoni yako. Iyo, nenzira, iri godend yekutsvaga iyo Oculus chitoro uye kunhonga mitambo kana kubata vanofambidzana. Iwe unoziva, mabasa ausingade kuisa iyo Quest 2 pairi.
Ikozve kune iyo yese muganho setup maitiro, ayo ari Windows Yakavhenganiswa Reality mahedhifoni inoda kubata headset mumaoko ako uye nemuviri kutsvaga nzvimbo. Iyo Oculus nzira yaitaridzika kunge yakangwara mushe pakuenzanisa kekutanga nguva yandakasangana nayo.
Uchishandisa ayo makamera mazhinji, inopa vhidhiyo yekudya kwenzvimbo uye ndokungokumbira iwe kuti ubate mumwe mutungamiriri pasi kuti uwane pasi pevhu uye unongonongedza uye dhonza muganho. Mushure meizvozvo inoona zvinhu zvakasiyana zvekukwirisa mukati memuganhu uye yonyevera kuti izvi zvinogona kuva zvipingaidzo zvinoda kubvisa.
Kutaura nezve iyo passthrough vhidhiyo yekudya, inogona kunge iri yakaderera-res, mune nhema uye chena uye iine mashoma kwazvo furemu reti, asi iri chokwadi chakaringana kutarisa nzvimbo yako kana iwe uchida. Oculus ikozvino ine chiyero chekuyedza icho chinokutendera iwe kuti pinda-pinda chero divi reKutsvaga kana Kutsvaga 2 uye utore passthrough feed ipapo ipapo, kunyangwe uchiri mumutambo. Anochinja mutambo chaiye.
Chimwe chiitiko chenguva yemberi yaive yekutevera-ruoko, iyo yakangoiswa kuQuest uye Quest 2 ine software yekuvandudza. Iwe unogona kudhonzera vatongi vako, iyo nenzira iyo zvakare inopawo imwe nhanho yeanoshamisira-chigunwe-chinzvimbo chekutevera uye ingo shandisa maoko ako muVR, pamwe nekushinyira matinji kusarudza zvinhu uye kudzvanya imba uye menyu sarudzo.
Ichiri kure nekukwana uye mitambo yakawanda haitsigire senzira yekupinza, asi uchiienzanisa neyakajairika ruzivo rwandave narwo nekuwedzera Leap Motion ruoko-kuronda kuLenovo Explorer, iyo Oculus ruoko yekutevera uye tarisiro yayo mune imwe nzvimbo yese.
Ikozve kune Oculus Link uye zvakajairika kugona kubatanidza iyo Quest 2 kuPc uye kutamba izere PCVR mazita. Kuwana izvi kwenguva yekutanga neHalf Hupenyu Alyx ndizvo chaizvo zvakandisundira pamusoro pechisarudzo muchisarudzo chekurega zvachose Lenovo Explorer.
Pamutemo, iyo Kutsvaga uye Kutsvaga 2 inogona kuvezwa waya kuPc uchishandisa chero yepamutemo Oculus Link tambo kana inoenderana yechitatu-bato imwe. Iyo yekutanga inoshanda zvakanyanya, nekuti iri chaiyo tambo yeUSB, asi inodhura zvakanyanya. Kana iwe ukaronga pakutora yakachipa yechitatu-bato sarudzo, iwe ungangoda 5m tambo, iri kusundira kurudyi-kumusoro kutarisana nehurefu hwakareba hweiyo USB spec saka inoda kuve yakanaka-mhando imwe.
Kune zvimwe zvekufunga futi uye zvirinani mashoma akanakisa zviwanikwa pamhepo zvinotsanangura izvo tambo dzinoshanda. Takabudirira zvikuru ne5m Anker PowerLine + USB Type-C kune Type-A 3.0 tambo, nemutengo unonzwisisika. Neraki, ndizvo zvese zvaunoda yeOculus chinongedzo, ikozvino, sezvo yayo 5 Gbps dhata yekupfuura yakakwana.
Ikozve kune yakatonyanya shanduko isina waya nzira kune PC kubatana. Yedu nzira yesarudzo uye yakanaka-yakawanda iyo de facto chiyero chevazhinji vashandisi pamhepo ndeye 20 EUR Virtual Desktop software. Iwe unochida, uyezve, kune chakanakisa chiitiko - iyo wired ethernet yekubatanidza kune iyo PC iwe uri kutenderera mitambo yeVR kubva uye ne5GHz Wi-Fi kubatana kune iyo Quest 2.
Pane zvakawanda zvakavanzika zvekufunga nezvazvo, asi kunyangwe neyakareruka 5GHz router, isu takakwanisa kuwana yakachena kwazvo pikicha paQuest 2, iine 866 Mbps yekubatanidza uye inokwanisika 30-ish milliseconds ye latency. Zvichida hazvina kukwana zvakakwana kune pro-level Beat Saber, asi zvinopfuura zvakaringana zvemitambo uye yekuona mitambo.
Iyo Quest 2 inotsigirawo Wi-Fi 6 uye ine fani nyowani yeWi-Fi 6 router ine zvishoma zvishandiso zvakasungirirwa pairi, isu tine 1,200 Mbps yekubatanidza. Iyi yakakwana bandwidth kuti ikwanise kugonesa iyo nyowani nyowani 90Hz modhi muiyo Virtual Desktop software uye unakirwe PC VR ant 90Hz ine zvachose isina anoonekwa matanho ekudzvinyirira uye kunyange pakati nepakati latency muiyo 20ms renji.
Izvi zvinoita kunge zvemashiripiti, asi kunze kwekufungidzira ndekwekuti ine chekuita nenzira iyo iyo Kutsvaga uye Kutsvaga 2 zvakagadzirirwa kushanda mune ino PC-tethered modhi. Kusiyana neyakajairwa PC VR headset, iyo ine yakajairwa vhidhiyo interface (kazhinji HDMI), padivi peUSB yedata, iyo Quest uye Quest 2 inongova ne USB chete yekubatanidza data. Izvi zvinoreva kuti iyo vhidhiyo uye yekudzora uye sensor dhata yakaiswa mumapepa, yakamanikidzwa uye yozotumirwa kubva kune mumwe mugumo kuenda kune imwe uye isina kumanikidzwa munguva chaiyo.
Oculus yakatsaurira kwakawanda kuyedza pazvinhu zvakaita sekusagarira uye latency kudzikisira uye ino chaiyo nguva yekudzvinyirira tech kune yayo yekutanga-bato Oculus Link mhinduro, zvinova izvo izvo Wireless Desktop inoita kunge iri kuvaka pamusoro payo isina waya mhinduro. Izvo zvinonakidzawo kuziva kuti iyo Quest 2 zvakare ine 60GHz Wi-Fi 802.11ay module uye antenna, parizvino isiri kubvisirwa chero chinhu. Isu tatoona imwe isina waya yeVR mhinduro yekuwedzera yakati Ultra-inokurumidza, yepedyo-tekinoroji uye kufungidzira kwedu kwakanyanya kuti nekukurumidza kana gare gare Oculus ichave irikutangisa dongle uye isina waya vhezheni yeOculus Link.
Kutaura nezvekutaurirana pasina waya, iyo Kutsvaga uye Kutsvaga 2 vane Chromecast rutsigiro Izvi zvinopa iri nyore nzira yekugovana mu-mutambo kuona pamwe neboka. Chimwe chinhu icho, zvinosetsa, ini ndaona chiri chikamu chikuru chekushandisa kwangu kweVR mumakore apfuura. Chikamu chinoshamisira kuve icho icho VR chine hunhu asocial. Izvo hazvifanirwe kuve zvakadaro, zvakadaro, iwe paunenge wakaita seni ndichigara ndichiedza kudzidzisa shamwari munzvimbo. Iine iyo yega-ine iyo Kutsvaga 2 zviri nyore kupfuura kunyange.
Chekupedzisira, kune avo vasina ruzivo neOculus Mobile OS inomhanya paChipiri 2, isu tine mashoma mashoma screenshots, akabatwa muVR. Regerera iwo asina kunaka makona.
Oculus Mobile OS interface uye sarudzo yekuteedzera-ruoko
Oculus Mobile yakavakirwa pamusoro peiyo Android, iyo inobvumidza iyo Quest uye Quest 2 kuti itore mukana weizvo zviri chaizvo zviri zvevashandisi vema smartphone zvavakatarisana nazvo, pasina misoro yakawandisa kana kusimudzira pamusoro.
Iyo UI yakanyanya kuchena uye kurongeka. Mamenu uye sarudzo zvakaiswa-zvine musoro. Izvo zvakare zvinokwezva maziso uye zvachose mufaro kushandisa. Kana iwe ukachera zvakadzika zvakakwana mukati meiyo Android guts kuseri kwechiitiko uye wotanga kurodha pasi maAPK uye akasiyana maapplication, iwe nenzira isingazungunuke uchasangana nekumwe kusanzwisisika kwekuisa uye pointer maitiro uye glitches. Zvimwe kunze kweizvozvo, Oculus akaita basa rinoshamisa rekuviga kure-kushanda kwavo kwemidziyo yavo yekuzviriritira yakakwana.
Mune niche inokura uye inonakidza iyo ichine zvimwe zvimiro zveveruzhinji uye zvevashandisi-zvigadziriso zvekugadzirisa mune ramangwana rayo, Oculus, kana kuti Facebook inoratidzika kunge iri yevamwe vashoma vanotora musika zvakanyanya.
Iyo Quest 2 haina chinhu chipfupi pane echimurenga chishandiso, kunyangwe pane chinosimbe uye chakakamurwa chiitiko. Iyo inoshamisa zvakagadzirwa zvakanaka, zvakaiswa pamwechete uye zvinofambiswa nesoftware yakabwinyiswa, ichiendesa inotaurika uye inotsetsenura ruzivo mumutambo wayo.
Kunyange ichinyatsoita kukunda mune zvimwe zvinhu uye simba mbishi neimwe, yakakomba mhinduro yeVR, ichiri kukwanisa kurongedza zvakakwana chipenga chehardware nekugadziriswa kwayo uye nekuvimbika kwese, pamwe nehunhu hwekutevera kukunda huwandu hwakawanda hwevanokwikwidza kunze uko.
Uye sekusvika pakukosheswa kwekukosha, nemutengo wekutanga we $ 299 chete yeiyo 64GB modhi iri mumutambo wayo. Kunyangwe kunyatso kukura kwakapenga iyo Microsoft yakakwanisa kuburitsa maererano nemutengo wakanaka weVR neMixed Reality chikuva inogona kusvika padyo nemutengo unopihwa neKuda 2.
Ehezve, hachisi chakavanzika, kuti izvi zvaingogoneka kuburikidza nerutsigiro rukuru uye mutengo wemubhadharo neFacebook, neese makakatanwa akaunza pamwe chete. Isu hatidi kudzivirira chero epaFacebook mamwe maitiro anotyisa ekunonoka. Iko 180-degree kutendeuka pane chivimbiso chekuchengeta Oculus akasununguka kubva kuFacebook account zvinodiwa zvakanyanya kurwadza kune vateveri veVR izvo vazhinji vasingakwanise kupfuura.
Asi kutonga nezvido zveveruzhinji muKutsvaga 2 kunyangwe kusvika pakunotora madziva makuru ehusungwa kupaza mari bounty, zvakanaka kutaura kuti kunyangwe vatsoropodzi vane utsinye vanobvuma kuti sechishandiso, iyo Quest 2 haisi pfupi yekuchinja iyo VR nzvimbo yakazara.
Oculus Kutsvaga 2 vs. Oculus Kutsvaga giraidhi kuenzanisa: Zviri nani nzira
Oculus Kuda vs HTC Vive Focus Plus: Ndeipi yaunofanira kutenga?
Oculus Kutsvaga 2 kudzokorora: Iyo chete VR misoro yaunoda
Oculus Kutsvaga 2 kuongorora: VR superstar
PS5 "Yekupedzisira FAQ" Inopindura Yako Mibvunzo NezveSony's New Console
Yakanakisa mitambo yemitambo yePS4 uye Xbox: Iwo akanakisa mahedhifoni eaconsoon emitambo muna2020
Maitiro ekukanda yako Oculus Kuda kuTV neChromecast
Iyo Oculus Kutsvaga yakangowana ruoko rwekutevedzera, heino maitiro ekuvandudza ako
HTC Vive cosmos ongororo: Zvikamu zvakaenzana zvakanaka uye zvinoshatirisa
Aya ndiwo akanakisa Nintendo Chinja Vanodzora: Hori, 8bitdo, PowerA, uye Zvimwe!
Windows 10 akanamatirwa pamusoro Ndokumbira chidzitiro
17 Kutonhorera Arduino Miromo YePfungwa DIY Vanopinda
Batanidza Masero Pakati Pakati Masheti uye Mabhuku Ekushanda Mune Excel
Basa rakasarudzwa harifaniri sevhisi yakaiswa, 0x80070424
OTT Inotsanangura: Ndeupi Musiyano Pakati POP & IMAP Mune Yangu Email Akaunti?
Windows 10 Dynamic Lock haisi kushanda kana kushayikwa
Printer haizodhinda, Mushandisi Kupindira Inoda dambudziko mukati Windows 10/ 8 / 7
Maitiro ekuchinjira ku5GHz pane Mac
OPPO Tsvaga X3 Pro inowana inoenderana yekuvandudza mwero we1Hz-120Hz ine yekuvandudza
Ronga Nguva Isiriyo mu Windows 11 Iyo Dual boot ine Ubuntu Linux
Maitiro ekugadzirisa DXGI_ERROR_DEVICE HUNG kana Reset mameseji mukati Windows 11 / 10
Vamwe Vashandisi veApple Watch Vanoona Nyaya dzekuchaja Mushure meKugadziridzwa kune watchOS 8.3
Zvakanakisisa zveGoogle Home 2020 Zvigadzirwa zvepamusoro zveGoogle Home zvekutenga nhasi
Nzira yekugadzirisa kana kuvakazve WMI Repository on Windows 10
Madhiraivha matsva eGeForce akagadzirirwa Call of Duty: WWII
11 yeakanakisa Mahara eGoogle Mapepa Matemplate e2020